UNhleko uqokelwe esokubumba amaBhokobhoko akusasa - Impempe
UNhleko uqokelwe esokubumba amaBhokobhoko akusasa
February 14, 2021 Impempe.com
Umqeqeshi omusha waMabhokobhoko amancane, uBafana Nhleko
Ngeke ahluke kangako kwabaphambi kwakhe ekuthuthukiseni ikhono kumaJunior Springboks uBafana Nhleko oqokwe njengenhloko yabaqeqeshi entsha eqenjini elinomlando omude wokukhiqiza amaBhokobhoko okugcina kukhalwa ngawo umhlaba wonke.
Cishe bonke abadlali abagcina bezakhele igama kumaBhokobhoko kukhona lapho beke badlala khona kumaJunior Springboks phambilini.
ISouth African Rugby Union (Saru) ayivele iqashe noma ngubani kulesi sikhundla kwazise sibukwa njengesiyikusasa lamaBhokobhoko ngaleso sikhathi.
UNhleko akamusha kuleli qembu njengoba engena esikhaleni salowo abevele eyiphini lakhe uChean Roux.
URassie Erasmus odle isicoco somhlaba namaBhokobhoko ngo-2019 kodwa osengusomaqhinga weSaru, nguyena omemezele uNhleko njengomqeqeshi omusha wamaJunior Springboks.
“Kuyajabulisa ukubona into enje yenzeka phambi kwakho ekubeni wake waphupha ngayo,” usho kanje u-Erasmus eqinisekisa ukuqashwa ngokugcwele kukaNhleko kulesi sikhundla kanjalo noSandile Ngcobo oseyinhoko kwiSA Rugby Sevens Academy.
“Sizibophezele ekutheni siqinisekise ukuthi bonke abaqeqeshi obafanele umsebenzi bayawuthola ngisho ngabe bayiliphi ibala.
“Kuwuhlelo lwethu vele ukuthi uma kuvela izikhala bakhuliswe abaqeqeshi abakhombisa izimpawu zokudlondlobala njengoba kwenzeka ngalezi zinsiwa zombili,” kusho u-Erasmus onomlando wokunika uSiya Kolisi isikhundla sobukaputeni kumaBhokobhoko.
Kwakungokokuqala umdlali omnyama enikwa lesisikhundla ebholeni lombhoxo kuleli. UNhleko uthe uzowenza ngokwethembeka nokuzimisela lo msebenzi wakhe obalulekile.
“Angazi nokuthi ngingathini ngendlela engilijabulela ngayo ithuba lokusebenza nabafana beminyaka engaphansi kwale eyombhoxo okhokhelayo.
“Ngeke ngihluke kwabaphambili kunami kulo msebenzi ngokukhiqizela amaBhokobhoko asezingeni eliphezulu.
“Kuyinto engaphakathi kimi ukuthanda ukusebenza nabafana abancane ikakhulukazi abaseNingizimu Afrika eyaziwa umhlaba wonke ngethalente,” kusho uNhleko.
AmaBhokoBhoko, Ibhola lombhoxo
Previous Previous post: ISwallows ilivove inkani iqhalaqhala elinguBenni McCarthy
Next Next post: Ufike kwabonakala uDa Gama kwiGalaxy – Msimango